Finch ane nyeredzi Tom Hanks, achange ari paApple TV + | Ndinobva mac
Apple inoda kuenderera ichiwedzera mhando zvisikwa kuApple TV +. Kune izvi, panguva yesendi yakaitika mazuva mashoma apfuura, ivo vanotsvaga kodzero dzeiyo firimu Finch inotungamidza Oscar-anokunda Tom Hanks. Vakakunda bhidha uye saka ivo vakunda kodzero yekuratidza firimu remutambi mukuru uyu pachikuva ichi.
Vaya vane basa reApple TV + vakakwanisa kuhwina okisheni yekodzero yemufirimu inotarisana naTom Hanks Finch yaimbozivikanwa seBios inoonekwa mukati meiyo sci-fi genre iyo pakutanga yaida kusunungurwa neUniversal. Zvinotarisirwa kuti iyo kutanga kuve kwekupera kwegore. Kuenderana nemwaka wemubairo.
Iyo bhaisikopo iri inotungamirwa naMiguel Sapochnik, uyo akatungamira zvimwe zvezvikamu zve Game of Thrones, nekudaro kuhwina mumwe wake maviri maEmmy akateedzana. Iyo script inowira kuna Craig Luck naIvor Powell, iye wekupedzisira aive mubatanidzwa mugadziri paBlade Runner uye Alien. Mufananidzo wacho unogadzirwa naKevin Misher, Jack Rapke, Jacqueline Levine naPowell. Vagadziri vakuru ndiRobert Zemeckis, Luck, Sapochnik, Andy Berman naAdam Merims.
MuFinch ,murume, robhoti uye imbwa vanoumba mhuri inypical. Hanks anotamba Finch, injinjini yemarobhoti uye mumwe wevashoma vakapona yechiitiko chezuva chakasiya nyika yasiyiwa. Iye protagonist anga achigara munzvimbo yepasi pevhu kwemakore gumi uye avaka nyika uye chaicho chake chaanogovana nembwa yake, Goodyear.
Kuti uchengetedze imbwa, gadzira robhoti (inoridzwa naCaleb Landry). Sezvo vatatu ava vanotora rwendo rune njodzi kuenda kuAmerican West dongo, Finch anotambura kuratidza kwake zvisikwa iyo mufaro nekushamisika kuti zvinorevei kurarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Finch ane nyeredzi Tom Hanks kuve paApple TV +